कहालीलाग्दो ब्यथा- छोरीद्धारा चन्दा मागेर आमाको काज-किरिया - SangaloKhabar
कहालीलाग्दो ब्यथा- छोरीद्धारा चन्दा मागेर आमाको काज-किरिया
गुल्मी । सिङ्गो गाउँमा ढुङ्गाका छानाले बनेका अग्ला घरहरु छन् । त्यसै गाउँमा जम्मा दुई वटा घर छन् खरले छाएका । ति खरले छाएका घरमध्ये एउटा घरकोे कथा निकै कहाली लाग्दो छ ।
आमाको मृत्यु हुँदा १३ र १७ वर्षका छोरीहरुको साथमा सुको पैसा थिएन । धन्न अर्की विवाहित छोरीको साथमा दुईसय रुपैयाँ रहेछ । जुन रकमले रकपडा किन्न समेत पुग्दैनथ्यो । अन्ततः गाउँवासीले चन्दा उठाएर उनको अन्तिम दाहसंस्कार भयो ।
यस्तो विपदका विच र समाजको चुनौतिका वावजुद पनि साहघाटमा गएर आमालाई दागवत्ती दिने र काज किरिया बस्ने छोरीहरु हुन् गुल्मीको भनभने गाविसवडा नम्वर ९ टिमुरखर्क रोल्मा गाउँका १७ वर्षिया मिना घर्र्ती र १३ वर्षिया उनकी वहिनी जमुना घर्र्ती ।
२०६३ साल माघ १ गते उनका वावु पोमबहादुर घर्र्तीको दिल्लीमा गाडीले हानेर ज्यान गएको थियो । सामन्य किरिया खर्च दिईयो तर अपराधी पक्राउ गर्ने र उचित क्षतिपुर्ति दिने कुरमा सडकमा कुकुरको जस्तै मराई ठान्यो भारत सरकारले । स–साना तिन छोरीहरु मात्रै भएकी उनकी आमा वालकुमारी घर्र्ती श्रीमानको मृत्युका वारेमा खोज तलास गर्न सकिनन् ।
छिमेकीले चन्दा उठाएर छोरीहरुले आमाको काजकिरिया गर्दै छन भन्ने कुरा त्यस गाउँका सवै राजनैतिक दल , समाजसेवी शिक्षक वुद्धिजिवी सवैलाई थाह छ । तर पनि कुनै नेता, समाजसेवी र शिक्षकहरु फर्केर आएनन् । उनिहरुको अत्यन्तै विचल्ली देखेपछि टिमुरखर्क निम्न माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक विरेन्द्र केसीको भने मन खायो ।
उनले यस समाचारदातालाई गुहारे । त्यहाँ पुग्दा टिलपिल आँखामा आँशु पार्दै आमाको काज किरियाको कुनोमा वसेका ति दुई वहिनीहरु गुहारको मुद्रामा एक्कासी भक्कानो छाडे । डाँडा–भाटा देखिने गरी चुहीन थालेको सानो घरको छानो । तीन महिना पनि खान नपुग्ने जमिन, दिनभरी मजदुरी गरे साँझ चुलो वल्ने नत्र भोकै सुत्नु पर्ने अवस्थाका ति दुई वहिनीको रोदन र चित्कार सुन्दा मन थाम्न सकिएन उनिहरुसंगै बगे आँशु ।
दादा.. आमाले ढुङ्गा बोकेर बढो मुस्कीलले एसएलसी पास गराउनु भएको थियो यसै वर्ष । आमाको उपचार खर्च नै पुराउन नसकेपछि कसरी क्याम्पस भर्ना हौं ? मैले मलाई क्याम्पस बढाउने आमाको धोको पुरा गर्न सकिन भन्दै डाको छाडिन माईली छोरी मिना । कान्छी जमुनाको गहभरिएको थियो ।
ति विचल्लीमा परेका दुई वहिनीहरुको अवस्था बुझ्न कुनै राजनैतिक दलका नेता यहाँ आए ? भनेर ८ र ९ का वासिन्दाहरुलाई सोधखोज गर्दा सवैले एकै स्वरमा भने–‘ किन आउन यस्तो वेलामा चुनावको वेलामा पो राती तिनचार वजे तिरै आउँथे र दाल चामल र पैसाको समेत प्रलोभन देखाउँथे ।’
उनीहरुको आँगनमा वसेर रिर्पोटङ्ग गर्दा गाउँका सयौं दलित,जनजाती र अन्य समुदायका मानिसहरुको भिड लागेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश महिलाहरुले राजनैतिक दलविरुद्ध वितृष्णा व्यक्त गरे । उनिहरुले भने यस्तो विपद पर्दा फर्केर नहेर्नेहरुले किन सपना बाँड्नु ? प्रेम सुनारले यो समाचार रातोपाटीमा लेखेका छन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०२, २०७३ समय: १४:०२:०३